Maalinta: Juun 17, 2019
Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka ee Alanya
Dowladda Hoose ee Antalya, inta lagu jiro xilliga qaboobaha kadib roobab mahiigaan ah oo daadad iyo burburka ka dhacay wadada xeebta ee Alanya Gazipaşa Aysultan Beach Beach waxay bilaabeen shaqo deg deg ah. Adeegyada Degmooyinka Dawladda Hoose ee Antalya [More ...]
Manisa waxay sii wadaa inay ka shaqeyso gaadiidka nabdoon
Dowladda hoose ee Manisa, dhinaca kale inta ay dayactireyso iyo dayactir dhinaca kale ah, iyadoo la siinayo qulqulka taraafikada waddo raaxo leh oo wadada laamiga ah ay sameynayaan. Macnaha guud [More ...]
Gaadiidka Cusub ee Isbitaalka Magaalada Kayseri
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, mashaariicda gaadiidku way sii socdaan iyaga oo aan gaabin, ayuu yidhi. Duqa magaalada Büyükkılıç, horteeda Isbitaalka Magaalada marka lagu daro shaqada isgoyska ee dabaqyada badan leh, waa waddo kale oo isbitaalku leeyahay [More ...]
IMM waxay kordhineysaa sicirka gaadiidka dadweynaha
Kulankii ugu horreeyay ee Golaha Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul bishii Juun, gawaarida gaadiidka dadweynaha, Basaska Dadweynaha Gaarka loo leeyahay iyo Istanbul Otobüs A.Ş. Waxaa la go’aamiyey in la kordhiyo cadadka kaalmooyinka la siinayo basaska. AK [More ...]
TEM Jeexitaanka Wadada Waddada Marmara Waxay Furan Yihiin
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuu furi doonaa isgoyska TEM ee Wadada Waqooyiga Marmara dhamaadka isbuucaan, wuxuu yiri "Wadadani waxay muhiim u noqon doontaa warshadleyda gobolkaan, gaar ahaan." Ayuu yiri. Kitelli abaabulay [More ...]
Traffic Rail dhaqso u dhaxaysa Turkey Oo Georgia
Maareeyaha Agaasimaha Ali illayn haboon Georgia Tareennada General TCDD General David Paradze ka dib booqashada wafdiga Joorijiyaan Tareennada Turkiga yimid. Lasha Akhalbedashvili, Agaasimaha Guud ee Saadka iyo Makhaasiyadaha Georgia Railways, 17 [More ...]
Mashruuc casri ah oo ka mid ah mashruuca casriyaynta cusub ee mitrooga cusub ee Atkapı-Ataturk-Kirazli, natiijada koowaad ee shaqooyinka socda ayaa lagu qaaday saldhigga Bayrampaşa. Idaacaddaha ayaa ka dhigeysa degmooyinka Maltepe iyo Rami oo ay weheliso dhererka mashruuca iyo kor u qaadista kabaha sare. [More ...]
Saldhigga Malatya Station wuxuu bilaabaa habeen habeen ah Mashti
1M Station MAŞTI ayaa bilaabay duulimaadkii habeenkii si aan loogu noqonin dhibbanayaasha rakaabka ah ee tagaya Tareenka Tareenka ee Malatya. Cemal Erkoç, oo ah Maamulaha Guud ee MOTAŞ, ayaa sheegay in ay si adag u shaqeynayaan si ay rakaab ugu noqdaan meel kasta oo Malatya ah. [More ...]
Shaqooyinka Tijaabada ee Tower of Cambridge waxaa la bilaabi doonaa dhamaadka sanadka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radio Tower, '' Ilaa hadda waxaan sameynay horumar boqolkiiba boqol ah '85'. Dhamaadka sanadka, hadafkeenu waa inaan tijaabinno TV-ga Çamlıca [More ...]
Jabuuti Bandirma Port Passes to Albayraks
Sida la ogsoon yahay, heshiiska wax-ka-dhimista ee la xiriira wareejinta xaq u shaqeynta ee TCDD Bandırma Port muddo 36 ah ayaa dhaqan galay taariikhda 18.05.2010. Shirkadda 'Çelebi Holding' waxay ku guuleysatay in si gaar ah loo siiyo shirkadda Bandırma Port ee loogu talo galay 177.5 milyan oo doollar. [More ...]
Mashruuca Dawlada Hoose ee Magaalada Muğla ee Badda Cas ee Nadiifinta Xeebta ilaa maanta waxay u adeegtay doonta 4530. Degmada Muğla Sea Blue taaj abaalmarinta ugu horeysay ee Metropolitan iyo deegaanka dalka Turkiga [More ...]
Kooxo ka socda Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Manisa, laga soo bilaabo xarunta degmada Salihli ilaa 25 miyiga degmada, ilaa wadada isku xidha kaas oo la siinayo Gölmarmara, Akhisar iyo Istanbul iyo ilaa xadka miyiga 6 ee degmada. [More ...]
Habeenkii Habeenkii Gaadiidka Dadweynaha ee Manisa
Dowlada hoose ee Manisa, muwaadiniinta inay uhelaan safar raaxo leh nolosha kadib talaabadan si loogu badalo kala guurka si ay ugu noolaadaan gacan ku haynta rakaabka si looga fogaado cabashada inay ku socoto xawaare buuxa. Dowladda Manisa ee Magaalo-weynta, muwaadiniinta [More ...]
RayHaber 17.06.2019 Warbixinta Shirka
Bridge iyo Howlaha Xeebaha ee la Dhisayo Mashruuca Mashruuca Wadada Guud ee Malatya-Diyarbakir Diyaar Garowga Shirkada Gawaarida Dib-u-cusboonaynta Kaabayaasha Korontada (TÜLOMSAŞ)